The Fiver Christmas Awards 2018 | 1xbet
Diego Maradona, izay nampivondrona ny firenena rehetra ho iray tamin’ity fahavaratra ity niaraka tamin’ny lokony mampihomehy any Russia. Nomeny ny rantsan-tànana ireo mpankafy mpanohitra. Natory tamin’ny lalao afovoany izy. Nofonosina izy, namboarina tamin’ny voaloboka fotsy, tao anaty boaty mpanatanteraka, nitaky ny quack indray mandeha. Tsy nanome iray malama malama fotsiny izy. Fianarana boky fianarana amin’ny fiainana azy hatramin’ny farany, ary amin’ny ampahan’ny Fifa koa. Old Sepp dia mety nirehareha. TENY VONDRONA ARSÈNE HO AN’NY LONGEVITY MANAGERIAL </p < Mihataha, Lord Ferg! Ataovy iray, Tompoko! NY TENY BUSBY-FERGUSON noho ny fitiavany, ny fanajana azy ary ny fahatsiarovana azy an-tsakany sy an-davany </p. Yorke dia toa an’i Jürgen Klopp. NY BILLY McNEILL dia manome valisoa ho an’ny fitantanana am-pahombiazana </a <
Fantatrao hoe iza. Valopolo isan’andro, na izany aza! Izany dia saika nahatratra ny Theme Pub O’Fiver nandritra ny alina iray tao amin’ny valan-javaboary nitifitra an’i Tin.THE KENNY EVERETT AWARD FOR CHEEKIEST VIDEO SHOW
tafalatsaka tamin’ny lalao amboaran’ny Big Cup, nomena ny fomba nandehanan’ny kintana sy ny vorona bitsika teo an-dohany noho ny fikotranan’ilay sanganasa matihanina Sergio Ramos. Avy eo indray, tsy taitra i Karius fa tamin’io fotoana io dia nanapaka ny tendron’ny baolina kitra izy, na rehefa navelany hiverina ny lamosiny tamin’ny fomba Origami nanohitra an’i Bournemouth na West Ham na Roma. Noho izany dia takatry ny olona sasany fa nisy ahiahy mampiahiahy.Midika izany fa tsy ampy ny faharetana rehefa, iray volana latsaka taorian’ny fanazarana ny maha-mozika azy, dia nandefa horonantsary ny fandehanany nanodidina ny tranobe Hollywood mahafinaritra tamim-pitandremana. Mety na tsy mety, ny mpankafy te-hahita kely ilay volon-doha taloha taorian’ny c0ck-up manala laza, ary ity rakipeo ity, horonantsary yacht-rock tany am-piandohan’ny taona 80 tamin’ny anarany rehetra, tsy nanao soa taminy raha vao nanomboka izy manipy azy ireo amin’ny vanim-potoana mialoha an’i Tranmere. Izy izao dia indram-bola indramina ao Besiktas, izay toa mbola azony tombo-tsoa avy amin’ny tanan’ny sombin-drahalahy Rahalahy Lee Love. mpanao mari-trano tsy nahomby tamin’ny famaranana tamin’ny fiadiana ny amboara eran-tany, noraisin’i Chievo tamin’ny volana oktobra. Tamin’ny tapaky ny volana novambra dia lasa izy, efa namoy ny telo ary nanintona iray.Farafaharatsiny Andriamatoa Roy no nitandrina ny lapan’ny mpanjaka. NY EILEEN DREWERY fanomezana ho an’ny fanahy
Ny fanandramany hikarakara ny mpilalao salama amin’ny alàlan’ny fomba ara-panahy dia nanjary fihomehezana be. Na izany aza dia toa kintana iray amin’izao fotoana izao farafaharatsiny no nandinika akaiky. Roy Keane, lehilahy iray atosiky ny filan’ny pragmatika, dia toa nampivelatra ny finoana fa afaka mihatsara ny vahoaka amin’ny fahaizany ara-batana amin’ny alàlan’ny herim-po fotsiny. Raha izany ny fiezahany hamerina an’i Harry Arter sy Jonathan Walters hiverina amin’ny fahasalamana amin’ny alàlan’ny filazany azy ireo mba hitsangana, miampanga azy ireo ho mpangalatra, ary miantso azy ireo fa mijanona ho boot, dia misy zavatra tsy azo avela. Hevero ho fanasitranana amin’ny finoana ratsy. Facebook Twitter Pinterest Lehilahyo, any.Sary: Carl Recine / Sary mihetsika via Reuters
vanim-potoana, nandresy valo tamin’ny lalao 10 voalohany nataony mba hitondrana ny tampon’ny Scottish Premiership. Nizaka ny renim-pianakaviana manan-drà be izy ireo avy eo, ny karazany mety ho azonao, hoy izy, raha nilatsaka tampoka 5 000 metatra ny fiaramanidina manokanao tao anatin’ny korontana. Very tamin’izy ireo izao ny dimy tamin’ireo fito farany, fihazakazahana Fort Williamesque izay nahitana gubbings roa 5-0. Ny volombavan’i Craig Levein dia matetika no mpihetsiketsika amin’ny endrik’ilay ekipany: arakaraka ny hilalaovany dia vao mainka mahazo Alfresco Drinker izany.Raha tsy mamadika haingana ity fihodinana ity izy, amin’ny faran’ny taona dia tsy ho afaka amin’ny fanafoanana an’i Jethro Tull izy.
Nilaza i Michael Gove tamin’ny sakafo antoandro fiantrana tao Glasgow tamin’ny herinandro lasa teo fa mikasa ny hiresaka amin’ny lehiben’ny Papa Newc O’Rangers $ tevie Mbe izy “ho an’ny torohevitra momba ny fomba hivoahana an’i Eoropa milamina alohan’ny Krismasy”. Fair’s, zinger tsara kokoa noho ny zavatra rehetra ao amin’ny The Fiver amin’ny taona io.Ekena fa tsy bara avo izany, fa ny trosa tokony homena azy. Misoratra anarana amin’ny The Recap, ny mailaka fanaon’ireo mpampanonta ny mailaka isan-kerinandro. MPAMELAKA NY TAONA </1 p>
Gong any an-damosin’ny Sunderland, izay nahavita ny zava-bita mahatalanjona tamin’ny vanim-potoana Ridsdale Nasty Leeds tamin’ny alàlan’ny fahazoana famonoana roa nifanesy ary nanimba ny lazan’ny Chris Coleman tao anatin’ny 45 segondra. Ary inona koa, ity sarimihetsika tsy fahaizana ity dia nalaina tamina horonantsary ho an’ny fialambolintsika ao Sunderland ‘Til I Die, izay ampifandimbiasin’ireo mponina ao an-toerana hahita hoe firy ny ranomaso azon’izy ireo mitroka rehefa mandatsaka Tin be dia be amin’ny fiezahana hanatsara ny toe-pony.